Yarra Council - Libraries in Yarra Somali
You are here: Home > Services > Libraries in Yarra Somali Print Page
Libraries in Yarra Somali
Goluhu wuxuu siiyaa adeegayada maktabada dhamaan xubnaha bulshada. Maktabadaha Yarra ayaa masuul ka ah wadida hawsha maktabadaha Carlton, Collingwood, Fitzroy, North Fitzroy iyo Richmond.
Adeegyada laga heli karo maktabadaha? Waxaad amaahan kartaa buugaag, DVDs iyo magasiino laga soo duway dhamaan maktabadaha kale. Maktabadahayagu waxay bixiyaan iyaguna:
* Buugaag cajal ah, CD iyo MP3 * Fiidiyow, CDs iyo DVDs * Waxyaalla ku qoran afafka Jayniiska, Giriiga, talyaaniga, Fiyatnaamiiska, Isbaaniska, Turkiga, Carabiga iyo Soomaaliga * Macluumaad ku qoran Ingiriis luqadii labaad ah * Macluumaadka farbarashada dadka waaweyn * Helitaanka internet lacag la’aana * Adeegyada Maktabada Guriga * Xarakaadka fasaxa dugsiga * Naadiyada buugga * Munaasabadaha qoraagga * Caawimada shaqada guri * Qolalka kulanka iyo tababarka kumbuyuutarka wixii kiro ah.
Sidee uga qaybqaadanayaa adeegyadayada maktabada ee Soomaaliga ah.
Sidee isaga qorayaa maktabada? Xubinimadu waa lacag la’aan waxayna u furan tahay qof walba. Si aad isu qorto, booqo mid ka mid ah afartayada laamood buuxina foomka xubinimada.
Waxaad u baahan doontaa inaad keento dukuminti magacaaga ku qoran ka hor inta aanaan samayn xubinimadaada maktabada. Carruurta ka yar 18 sanadood waxay u baahan doonaan waalid ama masuul si ay u noqdaan xubin.
Waxaad iska qori kartaa online-ka dabadeedana waxaad ka xaqiijin kartaa faahfahintaada maktabada marka dambe oo aad timaado.
Marka xubinimadaadu la habeeyo, waxaa lagu siin doonaa kaarka maktabada kaas oo kuu ogolaanaya inaad amaahato sheeyo mid kasta oo ka mid ah shanta laamood maktabadahayaga Yarra.
Goobaha maktabadahayaga iyo saacadaha ay shaqaynayaan, halkaan riix (click here).
Waxaad la xiriiri kartaa maktabada adiga oo wacaya 1300 695 427. macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan adeegyadayada, ama inaad la hadasho qof soomaaliga ku hadla, waxaad wici kartaa khadka adeega mutarjumka ee Golaha oo ah 9280 1940.